Cele – 9han News
ထာဝရေႏွာင္ႀကိဳး premier show မွာ ကားတစ္စီးနဲ႔အျပည့္လက္ေဆာင္ေတြရလို့ ေပ်ာ္ေနတဲ့ခီေမာင္ႏွံ
ပရိတ္သတ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ (Now & Ever )ထာဝရ ႏွောင္ႀကိဳး ဇာတ္ကားႀကီး ႐ုံတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကား ကေတာ့ လူငယ္ဒါရိုက္တာခရစၥတီးနားခီ ရဲ႕ တတိယေျမာက္လက္ရာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ယခင္ဖန္တီးျပသခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားႏွစ္ခုလုံးကို ပရိသတ္က ဝက္ဝက္ကြဲအားေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ယခု တတိယေျမာက္ဖန္တီးမႈကိုလည္း အမ်ားက ေစာင့္ေမ််ာ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ဒီဇာတ္ကားေလးကို Now and Ever World
စင်္ကာပူကပေးတဲ့ ASIAN ACADEMY CREATIVE ဆုရသွားတဲ့ “ငါ့ရည်းစားက ပိုမိုက်တယ်”သီချင်းဗီဒီယို
ပထမဆုံး စထွက်ခါစကတည်းက တစ်နိုင်ငံလုံးကိုကြောက်ခမန်းလိလိပျံ့နှံ့နေရာယူသွားခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ “ငါ့ရည်းစားက ပိုမိုက်တယ်”သီချင်းကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မင်းစော်ထက် င့ါစော်က ပိုမိုက်တယ်သီချင်းနဲ့ ဒွန့်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကလည်းများခဲ့သလို ပွဲတစ်ခုခုဆို ငါ့ရည်းစားကပိုမိုက်တယ်သီချင်း မပါရင်မပြီးသလိုကိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးအခုထိလည်း ပွဲတွေမှာ ငါ့ရည်းစားက ပိုမိုက်တယ်လုပ်လို့ကောင်းတုန်းပါပဲ။ စိုင်းစိုင်းရဲ့ ငါ့ရည်းစားကပိုမိုက်တယ်သီချင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုထွက်ရှိလာပါပြီ။ အဲဒါကတော့ မကြာသေးမီက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Asian Academy Creative Awards 2019
ထွန်းထွန်းမှာရည်စားရှိလို့ ငိုကြွေးနေရတဲ့ SINON LORESCA
ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး Catwalk Model တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sinon Loresca က မြန်မာနိုင်ငံကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခဏတာ လာရောက်ရာမှ သံယောဇဉ်တွယ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Sionon က သူ့ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလှူအတန်းနဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ရင်း ကုန်ဆုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Sinon ကို အားပေးကြတဲ မြန်မာပရိသတ်တွေကလည်း
Korean artists admitted to having suffered from depression
After Sulli’s death, people became aware that there were many people suffering from depression. They also highlight some artists who have struggled to cope with the Korean artists
Police confirmed that Sulli had committed suicide
Police confirmed the cause of Sulli’s death at 3:21 pm on Monday, after police reported that Sulli had died. According to the Seongnam Sujeong police station, Sulli’s manager
Indra Kyaw Zin Zin, whose beauty is as beautiful as the eye can imagine
She is one of the most popular actresses in Myanmar, and possesses the talent and talent of the Academy Awards. She isavery successful actress, and she
Kyaw Win, who suffered serious injuries from filming the rape scene
Nyo Min Lwin, who is very famous on social media, is watching all the major cast members with the new actress, Win Zaw Kyaw and the new villains.
“Mano”, the writer of Thakin Aung Aung Thein (20), in Thaketa
Hello All Musicians I amagreat songwriter today, and I am the first teacher of all my talents since I started playing the song. Also, I would
Victoria and Amber, members off(x), return to Korea on Sulli’s funeral
f (x) member Amber has arrived in Korea today to clear his artistic activities. Amber, who has always hadasweet smile, came forward with his head down